Induction inosungira zvigadzirwa zvemadhamoni neRF inoshandisa bhenzi heater
musha / Applications / Induction Brazing / Brazing Dhaimondi Zvishandiso Ne Induction
Brazing Diamond Tools Nokudzivirira
Category: Induction Brazing Tags: brazing daimondi, brazing matanho edhaimondi, brazing madhayimondi zvishandiso induction, zvishandiso zvemadhaimani, yakakwirira frequency brazing diamondi, induction brazing diamondi
Brazing Diamond Tools Nekudzivirira Kupisa Brazing Equipment
Induction Kuchengeta ndiyo nzira yakatendeseka yekubatana nedhaimani kune simbi. Iyo zvakare ndiyo yakanyanya kushandiswa uye imwe yenzvimbo kunoitwa mashandiro sezvakavanzika zvekutengeserana mumakambani mazhinji. Iri bepa rinoedza kupa muongororwo wakazara wemadhaimani ekusimbisa, uye kuongororwa kwemidziyo ichangoburwa inoshandiswa kubhinzi kwezvinhu zvacho.
Induction Brazing inzira yekubatanidza zvidimbu zviviri pamwechete uchishandisa chetatu, yakanyungudutswa yekuzadza simbi - braze alloy. Iyo yekubatana nzvimbo inopisa pamusoro pechinonyungudika chebraze alloy asi pazasi pekunonyungudika kwezvinhu zvinobatanidzwa; iyo yakanyungudutswa braze alloy inoyerera ichipinda mugeji pakati pezvimwe zvinhu zviviri ne capillary chiito uye inoumba chisungo chakasimba painotonhora. Kazhinji paunenge uchijoinha simbi, chisungo chekupatsanurwa chinogadzirwa pakati pesimbi mbiri kuti dzibatanidzwe pamwe neiyo braze alloy.
Pamashoko ose anowanikwa nesimbi,kuburitsa kusungurudza inogona kuve yakanyanya kuita mabasa akawanda. Majoini eBrazed ane simba rakasimba - anowanzove akasimba kupfuura simbi mbiri dzakabatanidzwa pamwechete. Induction jointed joints zvakare dzinga gasi uye mvura, inomira kudedera uye kuvhunduka uye hazvibatwe neshanduko dzakajairika mukushisa. Nekuti simbi dzinobatanidzwa hadzina kunyungudika, hadzina kumonyaniswa kana kumwe kukanganisa uye nekuchengetedza hunhu hwesimbi.
Maitiro acho akanyatsokodzera kujoina simbi dzakafanana, izvo zvinopa iyo musangano dhizaini zvimwe zvekushandisa sarudzo. Magungano akaomarara anogona kugadzirwa mumatanho uchishandisa mafirita esimbi ane zvishoma nezvishoma nzvimbo dzinonyungudika. Pamusoro pezvo, braze alloy inogona kusarudzwa kuti iripire iyo yekupisa yekuwedzera mwero misiyano pakati pezvinhu zviviri. Brazing inokurumidza uye ine hupfumi, inoda tembiricha yakadzikira uye inogadzikana zvakanyanya kune otomatiki uye akaonda maitiro ekugadzira.
Induction Brazing yedhaimani kune esimbi substrates inosiyana zvakanyanya kubva pakusunga kujoina simbi. Panzvimbo pekuvimba nekapillary chiito uye chisungo chakapararira, iko kusungwa kwemadhaimani kunoenderana nekemikari yekuita.